Fiarahana tamin'ireo mpanakanto vitsivitsy tanaty 'Vorombý' | Ny androaniko
[Hira ] 29 Oktobra, 2020 07:21
Ketriketriky ny saiko farany teo ary mba naha-afapo ahy tokoa ny nanatontosana ity horonantsary ity !
"Vorombý" dia hiran'ny tarika Zopanage tany amin'ny taona 80'. I Ndrina Ranaivoarimanana no namorona azy ka nohavaoziny sy nataony tanatin'ny rakikira navoakany tamin'ny taona 2017 izy ary nampihirainy an'i Harinaivo Rabevala (Naivo) izay isan'ny mpikambana ao amin'ny tarika ihany koa.
Hevitra hafa no nitondrana ny horonantsary, mba niala kely tamin'ny mahazatra. Satria moa ny mpanakanto dia isan'ireo mpivezivezy mitety tany mitondra sy mampahafantatra ny talentany ka isan'ireo mandray vorombý matetika, misara-toerana amin'ny havana, namana, olon-tiana ka izy ireo no nindramina hampiaina azy. "Tsy misy ny mandra-pihaona ho antsika. N'aiza n'aiza misy anao dia ao anatin'ny foko hatrany ianao", hoy i Mahatma Gandhi izay.
Nahafinaritra fa maromaro ireo mpanakanto niresahana an-tsoratra, an-tendrilavitra avokoa, satria ny tena avy eto amin'ny solosaina atý Roma no miketrika ka ny sasany dia naka sary ny tenany ary nandefa ny anjaran'izy ireo tamin'ny mailaka fa ireo somary sahirana nanao ny azy mitokana no nanirahana ny mpikirakira horonana mba ho alainy sary. Fa mbola nahafinaritra tokoa ny naneken'izy ireo handray anjara tsy tam-pihambahambana na dia tsy olom-pantatro manokana aza ny sasan-tsasany.
Sitraka sy telina ho azy 12 mianadahy/mianaka : Edgard Ravahatra - Charles Kely - Son (Tarika Son) - Noum's Montana - Carol (Dillie) - Jaojoby - Alain Rabetrano - Radanz - Davis (Mika & Davis) - Alain sy Malala (JS Twins) ary Pita Rabeson.
0 Hevitra | "Fiarahana tamin'ireo mpanakanto vitsivitsy tanaty 'Vorombý'"